ESiberia - lena indawo enkulu olunothile, okuyinto oluthatha ezingaphezu kuka-60% endaweni sihlanganisa lonke izwe laseRussia. Ihlala ezintathu zezulu maqembu (athokomele, Arctic kanye arctic), ngakho izimo zemvelo kanye sezulu luhluke ezifundeni ezahlukene Federation. Lesi sihloko sichaza kuphela ulwazi olujwayelekile netimphawu sezulu zakule ndawo.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo Western eSiberia
Entshonalanga yeSiberia elisukela Ural baya Yenissei emfuleni. Abangaphezu kwesigamu insimu yalo kuhlala West laseSiberia Plain. Isimo sezulu kule ndawo ezwekazini.
Izinkomba sezulu akhiwa izimo zezulu we Russian Federation, etholakala kule ingxenye yeSiberia. Ngokuphelele enkulu Western eSiberia amanga Trans-Urals, Omsk, eKemerovo, Novosibirsk futhi saseTomsk izifunda kanye Altai Territory kanye Republic of Khakassia. Kancane ifakwa lapha Chelyabinsk, Sverdlovsk, Tyumen futhi Orenburg izifunda, Krasnoyarsk Territory, Republic of Bashkortostan, kanye KhMAO futhi YANAO.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo eSiberia engxenyeni esentshonalanga is akazange athonywe Atlantic emoyeni uquqaba, ngoba le ndawo ivikelwe kahle zase-Ural.
Kusukela ngo-Ephreli kuya ku-September, eNtshonalanga yeSiberia, waleso alethwa ingxenye e-Arctic Ocean, nasempumalanga. Ngesimo zasezindaweni futhi Highs ukuza arctic emoyeni mass, okwaletha cool.
Kusukela eningizimu futhi eningizimu-ntshonalanga imimoya nishaye ezomile Eshiya (Uzbekistan, Kazakhstan) kanye emakhazeni ukuletha sezulu ecacile futhi nesithwathwa.
Isimo sezulu eSiberia uqinile, ngakho kwezulu avareji yonyaka akuvamile ukushintsha kwelinye direction noma kwenye. Kwezulu yonyaka imayelana 300-600 mm umswakama womoya, ne kakhulu uku ihlobo noma ekwindla. It meteoosadki ngesimo imvula. Isithwathwa futhi uwela mayelana 100 mm cishe zonke Western eSiberia. Yiqiniso, lokhu isilinganiso. Ngokwesibonelo, ezindaweni ezizimele iqhwa ifinyelela izinga 60-80 cm. Ngokuqhathanisa, e-Omsk loluphawu neze ifinyelela 40 cm.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo eSiberia ngo ingxenye yayo entshonalanga wukuthi iningi izindawo imbozwe emaxhaphozini khona. Sinenkosi nethonya elikhulu izimo lokushisa, umswakama, okuyinto luhambisana nomthwalo kuncipha kwethonya sezulu yezwekazi.
Winter enyakatho Western eSiberia ihlala izinyanga ecishe, phakathi - mayelana eziyisikhombisa. Sub lucky okuningi kancane, kukhona zezulu ebusika nokubusa abantu izinyanga eziyisihlanu. Lezi izibalo kuhlobane ngokuqondile i lokushisa kusifunda ngasinye. Ngakho, i-South eNtshonalanga yeSiberia has lokushisa nobusika -16 ° C, futhi enyakatho - at -30 ° C.
Summer futhi ujabule kulezi zifunda, ngoba izinga lokushisa uhla kusuka +1 ° C (enyakatho) ku + 20 ° C (eningizimu).
Iphuzu aphansi lokushisa zase zihleliwe at -62 ° C esigodini eMfuleni iVáh.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo Eastern eSiberia
Esisogwini Insimu Yenisei laba yingxenye yolwandle iPacific nakangaka lamagquma. Izici sezulu Eastern eSiberia zinqunywa isikhundla salo indawo esipholile amakhaza. Yingakho-ke lingachazwa ngokuthi nokhahlo futhi yomile. Ngokuphambene, Western eSiberia, uhlobo sezulu e-Eastern eSiberia kuyinto babazi ezwekazini.
Kumqoka kakhulu imvelo Kuyaphawuleka ukuthi Eastern eSiberia ugxile upland futhi entabeni izindawo. Azikho emaxhaphozini futhi emathafeni ezingajwayelekile ngokwemvelo.
Kuzifunda ezilandelayo zivuliwe izikhala elalivuliwe: Krasnoyarsk kanye Trans-iBaikal Territory, Republic of Yakutia, zaseTuva, Buryatia futhi esifundeni sase-Irkutsk. ESiberia (Russia) kule ngxenye kunalokho nokhahlo yakhe, ngisho ezingalindelekile.
Ebusika, e-Eastern eSiberia obusa eningizimu kokuqondisa komoya, ephethe anticyclones ezivela e-Asia. Umphumela ukusungulwa kwesiGungu sezulu ecacile futhi nesithwathwa.
Entwasahlobo nasehlobo, emoyeni elomile njengoba Asian owandile Eastern eSiberia, kodwa, naphezu kwalokhu, imimoya aseningizimu ngokuvamile esikhundleni uquqaba emoyeni kusukela empumalanga, okuyizinto umoya wasolwandle ezimbili kuyiPacific Ocean. A umoya abandayo zilethwe arctic enyakatho lapha.
Isimo sezulu eSiberia wakhipha isinqumo sokuthi imvula endaweni Eastern eSiberia basakaza Ukuboshelwa. Isibalo esincane kunazo zonke kubo e Yakutia: 250-300 kuphela mm ngonyaka cishe zonke izikhala yezwe. Krasnoyarsk esifundeni uhlobo kwerekhodi. It ebangela inani elikhulu kwezulu kusukela 600-800 mm (entshonalanga) ukuze 400-500 mm (empumalanga). Ezinye izindaba zika-Eastern eSiberia nomtamo umswakama ukugqashuka kuyinto 300-500 mm.
Kakhulu ezibandayo Eastern baseSiberia buthatha nezinyanga zasebusika. I amplitude we okushisa kakhulu kuye ukwedlulela sezulu yezwekazi entshonalanga sezulu ngokucijile yezwekazi yeSiberia empumalanga. Uma eningizimu Krasnoyarsk esifundeni nezinga lokushisa lwenyanga yesibili yobusika imayelana 18 ° C, enyakatho-ke lehla -28 ° C, futhi engekude emzini Tours, futhi ifinyelela zonke -36 ° C.
Northwest Eastern eSiberia has Januwari lokushisa kwemini cishe -30 ° C, futhi maqondana Norilsk nasempumalanga eminye ke kuyehla kube -38 ° C. Northern Saha, lapho izinga lokushisa isilinganiso eliphansi kakhulu, -50 ° C, kwaba umlando ngo-1916, lapho izinga lokushisa yabonisa -82 ° C.
Eningizimu eningizimu-ntshonalanga yesithwathwa kakhulu buthaka. Esikhathini Yakutsk cishe kungabonakali, kodwa Trans-iBaikal esifundeni kanye Buryatia, isilinganiso Januwari lokushisa kuvuselwa -24 ...- 28 ° C.
Amazinga isilinganiso ngenyanga olufudumele konyaka washintsha kusuka ku: +1 ... + 7 ° C enyakatho ye-Krasnoyarsk Territory kanye Republic of Yakutia ukuba +8 ... + 14 ° C ngo-central okuyingxenye futhi kuze kube +15 ... + 18 ° C ngo- eningizimu. Zone izintaba futhi awalethe, izifunda isici ezifana esifundeni Irkutskaia, Buriatia, onqenqemeni Transbaikalian kubangela engalingani ukushisa ukusatshalaliswa. Ngakho kunomehluko okuphawulekayo Ngokwesilinganiso, amazinga okushisa nyangazonke isikhathi entwasahlobo-ihlobo. Isilinganiso Julayi thermometer uyama at azungeze +13 ukuba + 17 ° C. Kodwa kwezinye izindawo ezahlukene lokushisa kungaba okuningi.
ESiberia (Russia) ingxenye yalo engasempumalanga elinesimo sezulu esibandayo. Winter Uthatha izinyanga 5-6 (iBaikal region) kuya ezinyangeni 7-8 (Yakutia isikhungo kanye Krasnoyarsk Territory). Ngo enyakatho ekude ehlobo cishe akunakwenzeka ukuba ulinde, ngoba ebusika ebusa khona kwezinyanga ezingu-11. Abahlala engxenyeni ephakathi naseningizimu eMpumalanga eSiberia, inkathi efudumele (kuhlanganise spring nokuwa) Uthatha 1.5-2 kuya 4 izinyanga.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo ezisenyakatho eSiberia
Northern izindawo zitholakala ezindaweni nezinezimo zasezindaweni ezibandayo Arctic. Insimu ehlane arctic - okuqinile izinguzunga zeqhwa esingaweleki neqhwa. Kukhona ayikwazi atholakala cishe azikho izimila. I ezivundile kuphela lo mbuso kukhona wona obandayo futhi ulele, uyakwazi withstanding ongaphakeme lokushisa ekushintshashintsheni.
Isimo sezulu eSiberia le ngxenye Kunethonya albedo okukhulu. Kusukela ebusweni iqhwa onqenqemeni njalo kubonakala imisebe yelanga r. E. Icindezelwe ukushisa.
Naphezu kweqiniso lokuthi isamba isilinganiso yonyaka imvula kwaphela (400 mm), inhlabathi ligcwele umswakama, futhi iqhwa liliningi kakhulu futhi zilimaze.
Ezinzima sezulu Arctic babhebhethekisa iziphepho sethusa futhi iziphepho, okwenziwa ngesivinini yonkana insimu, futhi eshiya umzila isidlakela iqhwa emigodini.
Futhi kule ingxenye yeSiberia libhekene mists njalo ehlobo, njengoba kukhona amanzi olwandle ukuhwamuka ebusweni.
Phezu ehlobo, umhlaba akanayo isikhathi zishise, futhi iqhwa liyancibilika kancane kakhulu, ngoba izinga lokushisa isilinganiso zokhahlamba kusuka 0 kuya + 3 ° C.
Lapha ungakwazi ukubona lezi zemvelo engavamile Njengoba kwakuba ubusuku elimboze izindawo ezibandayo kanye izibani enyakatho.
Ngokumangalisayo, ezingaphezu kuka 60% endaweni waseRussia kuhlala eyiqhwa. Lokhu kungenxa kakhulu endaweni ka-Eastern eSiberia futhi iBaikal.
Iqhwa libhekene yokuthi phansi ungalokothi thaws ngokuphelele. Kwezinye izindawo, ibe okwesikhathi amamitha ayizinkulungwane phansi. E Yakutia ke eqoshiwe irekhodi of eyiqhwa ukujula - 1370 amamitha.
ERussia kukhona i-Museum of eyiqhwa nge isiboshwa ayo, lapho ungabona lesi simanga emangalisayo.
Climate Southern eSiberia
ngesimo sendawo enezintaba, elise iningizimu yeSiberia, ombangela sezulu umehluko.
Continentality inyuka empumalanga, lapho kwemithambeka kwezulu luningi. Kungenxa yokuthi babe iqhwa eziningi kangaka ezivamile kanye nokuncibilika kwezinguzunga zeqhwa yaseNtshonalanga Altai.
Winter sezulu eSiberia libhekene kuleyo ngxenye sezulu Licwathile libalele nge okushisa aphansi. Summer uhlale cool futhi esifushane, kuphela ezilwandle intermountain kuba iyomisa futhi ishisa kakhulu (lokushisa ngoJulayi - 20 ° C).
Kuyathakazelisa kakhulu ukuphendula umbuzo kanjani ulwandle kuthinta isimo sezulu of iningizimu yeSiberia. Naphezu kweqiniso lokuthi iRussia akanawo ukuxhumana ngqo Atlantic Ocean, nguye has nethonya elikhulu kakhulu isimo sezulu kuleli zwe. Iningizimu yeSiberia asiphethe snowfalls esindayo futhi ngesikhathi esifanayo ukwehla frost futhi ncibilika.
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo ingxenye laseSiberia eRussia zazinzima kakhulu, kodwa leli qiniso akuvimbeli wakhe ukuba inhliziyo ezweni lethu.
Amehlo Violet - uyinganekwane yini noma zingenzeka ngempela?
Mushroom eqolo esithombeni isihloko emhlabeni. Yiziphi amakhowe eqolo eRussia?
Umuthi we-oki-Mongolian: incazelo kanye Ukunakekela
I amachibi elikhulu eCrimea: igama, isithombe. Lapho kukhona amachibi eCrimea?
Pekhov Alexey Yurevich: Biography futhi lwezincwadi
Kanjani ukusheshisa umzimba?
Ubufakazi ezisekelwe imithi. Centre for Medicine Olusekelwe Ebufakazini. Izimiso emithi ubufakazi-based
Premium imoto - Audi A8 2012
Kuyini Lycium Barbarum? Lapho ukuthenga futhi indlela yokutshala Lycium Barbarum (Goji amajikijolo noma Lycium Barbarum)?